Zinus siri ike akara ngosi 12 inch na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
5 Mata Start Hotel Nwanyị Queen / King Hoo 14 '' Oge opupu ihe ubi matara akwa akwa akwa akwa akwaA na-eji mmiri mmiri na-acha uhie uhie, nke nwere 6cm 3 mpaghara, nke ike dị iche iche n'akụkụ akụkụ ahụ dị iche iche. Okomoko, mara mma, ihe okike a. Hotel matralite e nyere maka iji ụlọ nkwari akụ Start ise. Ọ dị mma maka ụlọ oriri na ọdụ ụgbọ mmiri dị elu. Enwere ike ịhazi nha ọ bụla na usoro.
1.Maybe ọ bụ ntakịrị ihe dị iche na ihe ị chọrọ. N'ezie, ụfọdụ paramita dịka usoro, ihe owuwu, ịdị elu na nha nwere ike ịhazi ya.
2.Maybe ị na-agbaghakwa ihe bụ ike kpakpando 5 Star Stact. Ọ dị mma, n'ihi afọ iri, anyị ga-enye gị ụfọdụ ọkachamara na-adụ ọdụ.
Ihe isi ọnụ na-enyere gị aka ịmepụta ọtụtụ uru.
4.WO obi uto igwa gi ihe omuma anyi, soro anyi okwu.
N'afọ ndị gafeworonụ, Rayson na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị elu na arụmọrụ mgbe ha ji ọrụ na-akparaghị ókè ahịa ha. Zinus First Central 12 inch na-etinye ọtụtụ ihe maka mmepe ngwaahịa na ndozi oke ọrụ, anyị edobela aha ọma na ahịa. Anyị na-ekwe nkwa inye onye ahịa ọ bụla ndị ahịa n'ụwa niile na ọrụ ọrụ aka na-ekpuchi ihe ndị ahịa, ahịa na ọrụ ahịa. N'agbanyeghị ebe ị nọ ma ọ bụ azụmahịa ị na-etinye aka, anyị ga-enwe mmasị inyere gị aka imeri okwu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa Zinus First 6 inch ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, na ebipụta. Ọ bụ nke dị elu! Anatala m ọtụtụ ekele. - Otu n'ime ndị ahịa anyị na-ekwu.